खुलेरै देउवाको विरुद्धमा उभियो नेपाल समूह, एमालेकै सरकार बनाउने भन्दै गरे यस्तो निर्णय ! – GALAXY
खुलेरै देउवाको विरुद्धमा उभियो नेपाल समूह, एमालेकै सरकार बनाउने भन्दै गरे यस्तो निर्णय !
काठमाडौं – दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले नेकपा एमालेको एकताका साथै सरकारमा सहभागिताबारे देखिएको अलमल अन्त्य गरेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
बुद्धनगरमा बसेको बैठकले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । यससँगै सरकारमा सहभागिताको च्याप्टर क्लोज भएको छ भने एकताको बल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय यो समूह अलमलमा रहँदा एमालेको एकता प्रक्रिया मात्रै नभएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत प्रभावित भएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण माधव समूहको अनिर्णय भएको बताउँदै आएका थिए ।
नेपाल समूहले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनलाई मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बाटो खुलेको छ । ‘सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न बैठक बसेको पनि थिएन । छलफल पनि भएन ।
हामी सत्तारुढ दल पनि होइनौं’, बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने ।एमालेका २६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत जाँदा नेपाल समूहका २३ सांसदले साथ दिएका थिए ।
२८ असारको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिंदा माधव नेपालसहित २२ सांसदले मत दिएका थिए । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्थे ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि अब तत्काल सरकारमा जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
बरु बैठकले माधव समूहलाई एकताबद्ध बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘हिजो स्थायी कमिटी एकताबद्ध भयो, आज पूरै समूह एकताबद्ध भयौं’, सांसद् दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन् ।
संसद पुनर्स्थापना भयो र देउवा प्रधानमन्त्री भए । अर्को धार पनि देखियो– देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नेदेखि अदालतमा दायर रिटमा समेत हस्ताक्षर गर्ने, तर पुनर्स्थापित संसदका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने ।
घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार लगायत दश स्थायी कमिटीका नेताहरु जस्तै केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि अलग–अलग सुझाव दिए । तर बैठकको समापनमा आइपुग्दा सिंगो समूह सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिएको छ ।नेता ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिई तटस्थ बसेका थिए । देउवालाई महन्थ ठाकुर पक्षले विश्वासको मत दिएपछि संसद् र सरकार जोगाएकाले पार्टी जोगाउन यस्तो निर्णय लिएको उनीहरुको तर्क छ ।
‘संविधान र संसद् जोगाउन गरिएका निर्णयहरुमा हामीभित्र अलगअलग मत थियो । तर कम्युनिष्ट आन्दोलन र एमाले जोगाउने शर्तमा एकजुट भयौं’, डा.भट्ट भन्छन् ।
स्थायी कमिटीका नेताहरु जस्तै केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि अलग–अलग सुझाव दिए । तर बैठकको समापनमा आइपुग्दा सिंगो समूह सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिएको छ ।
‘कतिपय असहमतिहरु छन् । दश बुँदे कार्यान्वयनमा आशंका छ । तर पार्टी एकताको पक्षमा उभिन तयार भएका छौं’, केन्द्रीय सदस्य राजन राई भन्छन् ।